KUTI HAPANA? Vhura snack bar muchikoro? -Company Nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
KUTI HAPANA? Vhura snack bar kuchikoro?
Pakati pezvikamu zviviri izvi,
Iye mukuru Sina-weibo weChina News Network zvinyorwa:
Bazi rezvedzidzo rakagadzira Mitemo zvakajeka:
Kubva Kubvumbi 1st, 2019
Zvikoro zvepuraimari, zvesekondari uye kindergartens hazvibvumidzwe kumisikidza zvidhakwa, zvitoro zvikuru nedzimwe nzvimbo dzemabhizimusi ezvokudya.
Kana paine chikonzero chekumisa, mvumo ichawanikwa maererano nemutemo.
Kutanga nemwedzi unotevera, Vadzidzi vePuraimari uye Sekondari Vadzidzi mudunhu rese vangazofanira kuonekana nechikafu chechikafu.
Mune mamwe mazwi, huwandu hwevatengesi michina vanowana rezinesi zvichawedzera pachena zvakafanana. Izvi pasina mubvunzo zvichasimudzira kuvandudzwa kwemaawa matsva makumi maviri nemana ekuzvishandira zvine hungwaru kutengesa zvekare mukambasi uye kuchengetedza kukura kune hutano kwevadzidzi.
Zoomgu michina yekutengesa mukambasi
Kusimudzira manejimendi chikafu chinogadzirwa nemuchina wekutengesa, senge mukaka une tembiricha yakaderera uye mvura yekunwa ine hutano.
Kudzivisa yakakwira-munyu, yakakwira-shuga uye chakakora-mafuta chikafu chinopinda musasa
Sekureva kweCCTV-2, mukaka une tembiricha yakaderera ndiyo yakanyanya musika mune ramangwana.
Mushure mekuona kunyadziswa kunokonzerwa neSanlu Milk Powder Chiitiko, indasitiri yemukaka yanga ichirwira. Pasina nguva refu, vamiriri veNPC vakaisa pamberi nyika ichawedzera rutsigiro rwayo kumakambani emukaka, uye maindasitiri ane hukama achawanawo mikana mitsva.
Nyanzvi dzakati maguta ekutanga neechipiri-nzvimbo ndidzo nzvimbo dzinonyanya kudyiwa zvigadzirwa zvemukaka muChina. Iyo yechitatu neyechina-tier maguta ari muchikamu chekurima. Dzakawanda uye dzakawanda mhuri dzemumadhorobha dzinoteedzera chikafu uye hutano mune ramangwana, izvo zvinounza matsva ekuwedzera kumabhizinesi emukaka.
Mukaka unodziya une chakakosha chinodiwa kumukaka mavambo. Inofanirwa kuiswa mufiriji kwemazuva mashanu kusvika ku3, matsva, akachengeteka, akasununguka uye achivaka muviri, kungofanana 'nezvibereko zvitsva'.
Iko kukosha kwehutano hwemukaka wekushisa wakadzika uri kure kupfuura weyakajairika tembiricha. Nyanzvi dzemakaka dzinonongedza kuti mukaka mutsva unovaka muviri, wakanaka uye wakachengeteka ndiyo sarudzo yakanakisa yevana, kunyanya zvinhu zvinoshanda mumukaka mutsva.
Mukaka une tembiricha yakaderera ungapinda sei muhupenyu hweveruzhinji, zvikoro, nzvimbo dzinogarwa, zvivakwa zvehofisi, kuti hupenyu hwevanhu huve noutano uye huve nani? Maitiro akasiyana akaratidzira yakaderera-tembiricha yemukaka Vending muchina ndiyo nzira yakanakisa yekugadzirisa dambudziko iri.
Zoomgu yakaderera-tembiricha mukaka Vending muchina unogadzirirwa kugadzirisa dambudziko iri.
Zoomgu Vending muchina
Kupisa kunochinjika zvakasununguka, chengetedza hutsva hwechigadzirwa chemukaka uye chikafu
Yili Mukaka wakaderera-tembiricha mukambasi
Zoomgu yakaderera-tembiricha yemukaka Vending muchina yakafarirwa nemhando dzakawanda nekuda kweiri nyore dhizaini uye yakakura tekinoroji.
Zviitiko zveZoomgu vending michina
Mu WeChat Bhadhara Partner Musangano
Zoomgu shamwari yake
Cloud SaaS Kuongorora System
"Mhinduro yemukaka wekutengesa muchina weKehati Nhengo Kadhi"
Inokunda Yakanakisa Kesi Mubairo weiyo Yega-sevhisi Midziyo
Cloud Saas yekutarisa system
Kuberekwa kweWechat Nhengo Kadhi Kugadziriswa
Rega vanoshanda vadzokere pamari, mari ionekwe
Wedzera huwandu hwekutenga zvakadzokororwa nevatengi
Yechokwadi-nguva data kutora, chaiyo kushambadzira
Tora vatengi uye rutsigiro rwehunyanzvi, chengetedza kushanda uye kushanda
Kurongeka kweKutonhora Kwekupisa Milk Vending Machine
Zvakangofanana nekuwedzera mapapiro kune ingwe.
Isu tichapa brand kusimudzira, mhando yepamusoro chiteshi zviwanikwa
Batch Kugadzirwa kwePasteur Milk Vending Muchina neBright Dairy
Yakajairika Kadhi, Campus Kadhi, Nharaunda Kadhi
Mhando nhatu dzemakadhi enhengo, dzinoshanduka
Zvinogona kutaurwa kuti "kadhi rimwe chete riri muruoko, hapana kunetseka nekutengesa zvinhu"
Sarudzo yakakosha pane kushanda nesimba.
Prev: Ndeipi ramangwana rekuzvishandira-rekutengesa?
Zvadaro: Misi yekutengesa michina, Mikana yemagetsi inowona pasi peiyo nyowani yekutengesa!